Kooxda Hargeysa oo xalay Saaxil ka qaaaday Koobkii Kubadda kalayga | Berberanews.com
Home CAYAARO Kooxda Hargeysa oo xalay Saaxil ka qaaaday Koobkii Kubadda kalayga
Kooxda Hargeysa oo xalay Saaxil ka qaaaday Koobkii Kubadda kalayga
Hargeysa-(Berberanews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xulka kubadda koleyga ee gobolka Maroodi-jeex guddoon siiyay koobka kubadda Koleyga, ka dib markii ay ka adkaadeen xulka gobolka Saaxil.
Tartanka ciyaaraha kubadda koleyga ee gobollada Somaliland oo beryahanba ka socday garoonka kubadda koleyga ee Timacade, ayay xalay ciyaar adag isku haleeleen xulalka gobollada Maroodi-jeex iyo Saaxil, iyadoo labada xulba ay soo bandhigeen ciyaar ku dhisan difaac iyo weerar, taas oo koox kastaaba ku dadaalaysay inay kooxda kale ee ka soo hor jeeda ka dhaliso goolal, kana guulaysato.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 19 dhibcood oo ay ciyaarta ku hogaaminaayeen kooxda gobolka Marood-jeex, halka gobolka Saaxil-na ay ka keensadeen 11 dhibcood, intii ciyaartaasi socotay ayay koox kastaaba ku dadaalaysay inay kor u soo qaado halkii ay ku liidatay qaybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaartaa dhex maraysay xulalka kubadda Kolayga ee gobollada Maroodi-jeex iyo Saaxil ayaa ku dhamaatay 52 dhibcood oo ay guushu ku raacday xulka gobolka Maroodi-jeex, halka gobolka Saaxil-na uu keenay 47 dhibcood.
Ugu dambayn tartankaas ciyaaraha kubadda Kolayga oo ciyaartaasi ahayd tii u dambaysay ayuu madaxweynaha JSL mudane Muuse Biixi Cabdi xulka gobolka Maroodi-jeex gudoon siiyay koobka kubadda Koleyga ee ciyaaraha gobollada Somaliland ee sannadkan 2020, halka xulka gobolka Saaxil oo hore u haystay koobka kubadda Koleyga ee Somaliland, uu kaalinta labaad galay.
Tartankaas ciyaaraha kubadda Kolayga Somaliland ayaa ku soo dhammaaday jawi nabadgelyo ah.
Previous articleCiyaartii Hargeysa iyo Gabiley oo dirqi lagu kala baxay
Next articleWefti ka socda dalka Djibouti oo booqday Mashruuca Beeraha Wajaale